एमएस समूह : व्यवसाय विविधीकरणमा केन्द्रित | गृहपृष्ठ
Home कम्पनी प्रोफाइल एमएस समूह : व्यवसाय विविधीकरणमा केन्द्रित
मुख्यगरी धागो, चिनी र स्टील व्यवसायमा संलग्न एमएस समूह नेपालको एक प्रतिष्ठित व्यावसायिक घराना हो । समूहले सन् १९९५ मा स्थापित रिलायन्स स्पिनिङ मिलबाट विभिन्न रङ र गुणस्तरको धागो, सन् १९९४ मा स्थापित एभरेष्ट सुगर मिलबाट चिनी र सन् १९९१ मा स्थापना भएको भगवती स्टील मिलबाट फलामे डण्डी, किल्ला, तार तथा भवन निर्माणमा प्रयोग हुने अन्य सामग्रीसम्बन्धी कारोबार गर्दछ । समूहअन्तर्गतको रिलायन्स स्पिनिङ मिल स्वदेशी बजारमा सबैखालको धागो आपूर्ति गर्ने उद्योग हो । यस मिलबाट उत्पादन हुने सुती तथा सिन्थेटिक धागो भारत, बङ्गलादेश र टर्की निर्यात हुन्छ ।
यो समूह धागोसँगै चिनी उत्पादन तथा विक्रीवितरणमा पनि संलग्न छ । समूहले चिनी उत्पादन गर्न सिराहा र महोत्तरी जिल्लामा दुई चिनी कारखाना स्थापना गरेको छ, जसमध्ये एभरेष्ट सुगर मिल नेपालकै ठूलो चिनी उत्पादन गर्ने कारखाना हो । एमएस समूहले उत्पादन गर्ने चिनी स्वदेशी बजारमा आपूर्ति हुन्छ । समूहले चिनी मिलमार्फत रू. ४ अर्ब ५० करोडको वार्षिक कारोबार गर्दछ ।
त्यस्तै, यो समूह फलामे डण्डी, किल्ला, तार तथा अन्य निर्माण सामग्री उत्पादन तथा विक्रीवितरणमा पनि संलग्न छ । स्टील तथा फलामको कारोबार समूहअन्तर्गतको भगवती स्टील र भगवती रोलिङ मिलले गर्दछन् । समूहले स्टील उद्योगमार्फत वार्षिक रू. ५ अर्बको कारोबार गर्दछ ।
हाल व्यवसाय विविधीकरको रणनीतिमा केन्द्रित समूहले होटल, कार्पेट र जुत्ताचप्पल उद्योगमा लगानी गर्दै छ । होटलमा लगानी गर्न समूहले काठमाडौंको ठमेलमा मेरियट सञ्जालअन्तर्गतको होटल फेयरफिल्ड सञ्चालनमा ल्याएको छ, नक्सालको मेरियट होटल केही समयमै सञ्चालनमा ल्याउने र कमलादीमा अर्काे होटल निर्माण गर्दै छ । कार्पेट र जुत्ताचप्पल उद्योग पनि सञ्चालनको क्रममा छन् ।
यो समूह ग्लोबल आईएमई बैङ्क र शिखर इन्स्योरेन्सको प्रवर्द्धक हो । समूह घरजग्गाको कारोबारमा पनि संलग्न छ । समूहको ओरियण्टल कन्ष्ट्रक्शनले घरजग्गाको कारोबार गर्दछ । समूहले विभिन्न उद्योग तथा व्यावसायिक फर्ममार्फत करीब रू. १६ अर्बको वार्षिक कारोबार गर्दछ । समूहको धागो मिलमा ४ हजार जना, चिनी मिलमा १ हजार जना र अन्यत्र १ हजार गरी कुल ६ हजार जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् ।
एमएस समूहको इतिहास
अन्तरराष्ट्रियस्तरको व्यापार/व्यवसाय गर्न समूहका संस्थापक मालिराम अग्रवालले सन् १९१० देखि नेपालमा व्यवसाय गर्न थालेका थिए । एमएस समूहको व्यावसायिक यात्रा पनि अन्तरराष्ट्रियस्तरको व्यावसायिक फर्म स्थापना गर्ने उद्देश्यले मालिरामले शुरू गरेकोे सोही व्यावसायिक यात्राबाटै आरम्भ हुन्छ ।
यो समूहले सन् १९८१ मा एक टेक्सटायल उद्योग स्थापना गर्‍यो, जसले होजियारी (मोजा, गञ्जी, टोपीलगायत) कपडा तयार गर्ने गर्दथ्यो । सन् १९८७ मा यो समूहले एक्रेलिक (सुती, सिन्थेटिक जस्तै एक प्रकारको धागो) धागो मिल स्थापना ग¥यो । यतिबेलासम्म यो समूह व्यवसायमा सफल रहे पनि उद्यम क्षेत्रमा भने स्थापित हुन सकेको थिएन ।
सन् १९९० मा यो समूहले गोल्यान समूहसँग साझेदारी गर्दै रिलायन्स स्पिनिङ मिल स्थापना ग¥यो र क्रमशः नेपालको एक सफल व्यावसायिक घरानाको रूपमा पहिचान बनायो । रिलायन्स नेपालमा अत्यन्त सफल उद्योगमध्ये एक हो । रिलायन्सले स्वदेशी बजारमा सबैखालको धागो आपूर्ति गर्दछ । यस मिलबाट उत्पादन हुने सुती तथा सिन्थेटिक धागो भारत, बङ्गलादेश र टर्की निर्यात हुन्छ ।
त्यस्तै, समूहले सन् १९९४ मा एभरेष्ट सुगर एण्ड केमिलक इण्डष्ट्रिज स्थापना ग¥यो र चिनीको कारोबारमा संलग्न भयो । सन् १९९५ मा यो समूहले फलामे डण्डी, किल्ला, तार, जाली तथा भवन निर्माणमा प्रयोग हुने सामग्री उत्पादन तथा विक्रीवितरण गर्न भगवती स्टील इण्डष्ट्रिज र पछि भगवती रोलिङ मिल स्थापना ग¥यो । सन् १९९५ मै भगवती कार्बिडे स्थापना गरी समूहले विभिन्न खालका ब्याट्री पनि उत्पादन गर्‍यो । हाल यो समूह विभिन्न व्यवसाय र फरक फरक क्षेत्रमा संलग्न छ । समूहको ओरियण्ट कन्ष्ट्रक्शनले रियल स्टेटको कारोबार गर्दछ । ग्लोबल आईएमई बैङ्कको प्रवद्र्धक रहेको समूहले मेरियट सञ्जालको होटल फेयरफिल्ड पनि सञ्चालन गर्दछ ।
एमएस समूहको प्रमुख व्यवसाय
यस समूहले सन् १९९० मा गोल्यान समूहसँगको साझेदारीमा स्थापना गरेको रिलायन्स स्पिनिङ मिलमार्फत विभिन्न रङ, किसिम र गुणस्तरका धागो उत्पादन तथा विक्रीवितरण गर्दछ । इटहरी–१२, खनारमा रहेको रिलायन्स धागो मिल देशकै ठूलो धागो मिल हो । यस मिलले विभिन्न देशबाट कपास आयात गरेर सुतीको धागो र स्वदेशी कच्चापदार्थ तथा फाइबरबाट सिन्थेटिक धागो उत्पादन गर्दछ । यस मिलबाट उत्पादन भएको सुती र सिन्थेटिक धागो स्वदेशी कपडा उद्योगले पनि प्रयोग गर्ने गरेका छन् । सिन्थेटिक तथा अन्य धागो भारत, बङ्गलादेश र टर्की निर्यात हुन्छ । धागोको मात्र कारोबार गर्ने रिलायन्सले वार्षिक रू. ६ अर्ब ५० करोडको कारोबार गर्दछ । धागो मिलले १५ सय महिलासहित ४ हजारभन्दा धेरैलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ ।
फलामे डण्डी तथा अन्य उपकरण
यस समूहले सन् १९९१ मा वीरगञ्जमा स्थापना गरेको भगवती स्टील मिल र सन् १९९५ मा स्थापना भएको भगवती रोलिङ मिलबाट फलामका डण्डी, किला, तार, जाली र भवन निर्माणमा चाहिने अन्य सामग्री उत्पादन तथा विक्रीवितरण गर्दछ । भगवती स्टील फ्याक्ट्रीले फलामका डण्डी, पाइप, तार, जाली, भवनका लागि चाहिने फलामका झ्याल, ढोका, पोललगायत उत्पादन गर्दछ । समूहले फलामको कारोबार निरन्तर विस्तार गरिरहेको छ । भगवती स्टीलमा मात्रै समूहको लगानी रू. ५० करोड नाघेको छ । यस समूहसँग फलामका उत्पादन तयार गर्न सन् १९९५ मा स्थापना भएको भगवती रोलिङ मिल पनि छ । यस मिलबाट घर छाउने जस्तापाता र अन्य उत्पादन तयार हुन्छ । यस मिलमा समूहले रू. १५ करोडभन्दा धेरै लगानी गरेको छ । समूहले उत्पादन गर्ने फलामका सामग्रीले नेपालको गुणस्तर प्रमाणपत्र र अन्तरराष्ट्रियस्तरको आईएसओ चिह्नसमेत पाएको छ ।
समूहको मुख्य व्यवसाय आफ्ना विभिन्न उद्योगमार्फत चिनी, धागो र स्टीलका उत्पादन तयार गर्ने र स्वदेश तथा विदेशका बजारमा लगेर विक्रीवितरण गर्ने हो । यस कार्यका लागि समूहसँग अलग–अलग क्षेत्रका अलग–अलग उद्योग छन् । चिनी उत्पादनका लागि समूहले सिराहामा हिमालयन सुगर मिल र महोत्तरीमा एभरेष्ट सुगर एण्ड केमिकल इण्डष्ट्रिज गरी दुई चिनी कारखाना सञ्चालन गरेको छ । यी दुई कारखानाबाट उत्पादन भएको चिनीलाई समूहले स्वदेशी बजारमा आपूर्ति गर्छ । एभरेष्ट समूहसँगको साझेदारीमा रहेको महोत्तरीको एभरेष्ट चिनी मिल नेपालकै ठूलो चिनी कारखाना हो । एभरेष्ट सुगर सन् १९९४ मा रू. ६५ करोडको लागतमा स्थापना भएको हो । यस समूहले दुई चिनी कारखानामा कुल रू. ४ अर्ब ५० करोडको वार्षिक कारोकार गर्दछ । समूहको चिनी मिलमा मात्रै पनि १ हजार भन्दा धेरैले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् ।
यो समूह विभिन्न मेशिनरीमा प्रयोग हुने बल बियरिङ उत्पादक कम्पनी एसकेएफको आधिकारिक विक्रेता पनि हो । पछिल्ला ३० वर्षदेखि समूहले मेशिनरीमा प्रयोग हुने यस्ता सामग्री नेपालमा विक्रीवितरण गर्दै आएको छ । एसकेएफ मेशिनरीमा प्रयोग हुने बल बियरिङको अन्तरराष्ट्रिय आपूर्तिकर्ता हो, जसले नयाँ प्लाण्ट जडान गर्ने, मेशिनको मर्मतसम्भार गर्ने, आवश्यकताअनुसार प्राविधिक तालीम दिने र मेशिनरी सञ्चालनमा सहयोग गर्दछ । समूहले एसकेएफले तयार गरेका मेशिनरीहरू नेपालमा विक्री तथा आवश्यकताअनुसार प्राविधिक सहयोग गर्दछ ।
समूहले सन् २००२ मा स्थापना भएको ओरियण्टल कन्ष्ट्रक्शन एण्ड डेभलपमेण्ट कम्पनीमार्फत रियल इस्टेटको कारोबार गर्दछ । काठमाडौंमा आवासको आवश्यकता पूर्ति गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको यो ओरियण्टल कन्ष्ट्रक्शनले आवासीय भवन निर्माण तथा विक्रीवितरण गर्दछ । करीब रू. २० करोडको लागतमा पहिलो आवासीय परियोजना ‘सनराइज होम्स’ सञ्चालनमा ल्याएको ओरियण्टल कन्ष्ट्रक्शनले अहिले रू. ७० करोडको वार्षिक कारोबार गर्दछ । कम्पनी घरजग्गाको कारोबारसँगै जलविद्युत् परियोजना तथा सडक (राजमार्ग) निर्माणमा पनि संलग्न छ ।
भगवती स्टील उद्योग (सन् १९९१)
भगवती रोलिङ मिल (सन् १९९४)
एभरेष्ट सुगर एण्ड केमिकल इण्डष्ट्रिज (सन् १९९४)
हिमालयन सुगर मिल
रिलायन्स स्पिनिङ मिल (सन् १९९५)
भगवती कार्बिडे इण्डष्ट्रिज (सन् १९९५)
ओरियण्टल कन्ष्ट्रक्शन एण्ड डेभलपमेण्ट कम्पनी
एसकेएफ डीलरशिप (बल बियरिङ्स)
ठमेलमा मेरियट सञ्जालअन्तर्गतको होटल फेयरफिल्ड
इटहरी–१२, खनार स्थित रिलायन्स स्पिनिङ मिलमा एमएस र गोल्यान समूहको साझेदारी
महोत्तरी जिल्ला स्थित एभरेष्ट सुगर एण्ड केमिकल इण्डष्ट्रिज र सिराहा जिल्ला स्थित हिमालयन सुगर
मिलमा एमएस र जनकपुरको सर्राफ समूहको साझेदारी
एभरेष्ट सुगर एण्ड केमिकल इण्डष्ट्रिजमा एमएस र एभरेष्ट समूहको साझेदारी
व्यापार–व्यवसाय विस्तार गर्न नयाँ व्यावसायिक फर्म खोल्ने
विभिन्न विदेशी कम्पनीको मध्यस्थकर्ता बन्ने (एजेन्सी व्यापारमा संलग्न हुने)
जुत्ताचप्पल उद्योगमा लगानी गर्ने
काठमाडौं र बुटवलमा होटल स्थापना गर्ने
१६ अर्ब (स्टील मिलमार्फत रू. ५ अर्ब, चिनी मिलमार्फत रू. ४ अर्ब ५० करोड र धागो मिलमार्फत रू. ६ अर्ब ५० करोड)
६ हजारभन्दा धेरैलाई प्रत्यक्ष रोजगारी